केटी4वर्षको लागि अज्ञात
28 अप्रिल, 2001 मा3वर्षीय केटीको नग्न, घटाइएको शरीरले कान्सास सिटी, मिसौरीमा एक चौथो नजिकैको भेट्टाइयो। दुई दिनपछि उनको टाउको नजिकै प्लास्टिकको फोहोरको थकान फेला पर्यो। यो केटीले4वर्ष भन्दा बढी हुनेछ, केटीले "बहुमूल्य डो" नाम दिएकी केटी, एरिक ग्रीनको रूपमा चिनिनेछ।
स्केच, कम्प्यूटर चित्रण र बच्चाहरु को बसहरु वितरित गरीएको थियो र धेरै टेलिभिजन अपराध कार्यक्रमहरुमा एक सापेक्ष अघि बढ्नु अघि5मई, 2005 मा पीडितको शिकार भयो।
आमा, सेफफिल्डर अभियोगमा चार्ज भयो
'बहुमूल्य डिएस' मामलाले पुलिसलाई चार वर्षको लागि निराश पारेको थियो र धेरै टेलिभिजन अपराध देखाइएको थियो, जसमा "अमेरिकाको सबैभन्दा चाहना छ।"
अन्तमा, पुलिस भन्छन्, यो एक परिवारको सदस्यबाट एक टिप थियो जसले अन्ततः अधिकारियोंलाई बच्चाको पहिचान र उनको मृत्युको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग पुर्यायो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि एक सिद्धान्तको एक दादाजीले अगाडि आयो र एरिक को तस्वीरहरु साथै बाल र आमाबाट बाल नमूनेका तस्विर प्रदान गर्यो।
5 मई, 2005 मा मिशेल एम जॉनसन, एरिक को 30 वर्षीया छोरी र हरिल जॉनसन 25 बर्षीया उनको सौतेदरलाई पक्राउ गरी हत्याको आरोप लगाए ।
प्रहरीले बताएका जॉनसनले उनलाई बताएपछि उनी एरिकसँग रिस उठ्दा शराब र पीसीपीको असरको अधीनमा थिए जब उनी बेडमा जाने गर्थे। उनले उसलाई कुटपिट गरे, उसलाई फलाममा फ्याँक्यो र त्यहाँ त्यहाँ बेहोश छोड्यो। एरिक को दुई दिन को लागि बेहोशी फर्श मा रहयो, किनकी जो दंपती को उपचार को लागि माने को अस्वीकार गरे किनकी उनि दुवै को गिरफ्तारी को लागि बाहिर को बहाव को लागि पुलिस ले भन्यो।
एरिक को मृत्यु पछि जॉनसन ले उसलाई एक चर्चित पार्किंग को लागी गरे, त्यसपछि एक जडीर क्षेत्र मा जहां दादफुड उनको हेड क्लप्टर संग काटता छ। एरिकाको शरीर एक चौतारीको नजिक पुग्यो र दुई दिनपछि उनको टाउको नजिकैको प्लास्टिक कचराको थलोमा फेला पर्यो।
डिसेम्बर 3, 2005 मा, अभियुक्तहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूले हरिले जॉनसन विरुद्धको मामलामा मृत्युको सजाय खोजे।
अधिकारियों को विश्वास छ कि जॉनसन उनको हेज क्लप्टर संग decapitating जब बच्चा मरे।
कसेज शेड्स लाइट एरिज द्वारा पीडित दुरुपयोग मा
हरिल जॉनसनको चचेरे भाई, लान्डा डिसिसेलका अनुसार, जयन्सन्स डिसिस्केलको साथ अप्रिल 2001 मा सारियो।
मिशेल जॉनसनले मृत बच्चालाई घुम्न गाह्रोमा राखेर एरिक को आफ्नो पतिलाई सहयोग पुर्याए जस्तै उनी सोइन्। पछि, उनले डास्किसेललाई बताए कि उनले एरिकालाई अर्को महिलालाई उठाउन दिए। उनले हरिललाई एरिक को दुर्व्यवहार को रूप मा उपचार गरे, भन्छन् कि उनले उसलाई उनको साना संक्रमणहरु को रूप मा रोना या नहीं चाहान को लागि को रूप मा हरायो।
एक दिन उनले बच्चाको कोठाबाट अचानक बान्क सुने र अर्को दिनको लागि एरिक कोठामा राखिएको थियो। दम्पतीले डिसस्केललाई सोधे कि बच्चा बिरामी भएको थियो। मिशेल जॉनसनले फेरि ड्रिसेललाई बताए कि उनले एरिकलाई महिलासँग बस्न जो पहिले बच्चालाई उठाए।
मिशेल जॉनसन दोषी
सेप्टेम्बर 13, 2007 मा, मिशेल जॉनसनले उनको 3-वर्षीय छोरीको दोस्रो-अर्काको हत्यामा दोषी ठहराए। एक दलाल सम्झौतामा , उनले आफ्नो पति, हरिले जॉनसन विरुद्ध गम्भीर पुष्टि गरे जुन पहिलो-अर्काको हत्या भएको आरोप लगाईयो। फिर्तीमा, अभियुक्तले मारिएको बच्चाको आमाको लागि 25-वर्षको सजावट सिफारिस गर्दथ्यो।
बहुमूल्य डोरको आमा पतिको विरुद्धमा पुष्टि गर्दछ
मिशेल जॉनसनले जरिवानालाई भने कि हरिले जॉनसन ड्रग्समा थियो जब उनले आफ्नो छोरीलाई टाउकोमा कुटपिट गरे र बच्चालाई बेहोशीमा फेरियो।
"उनले भर्खरै आफ्नो खुट्टा उठाए र अनुहारको छेउमा कुर्नुपर्यो। मैले भने, 'के तपाईले (अप्ठ्यारो) गर्नुभयो?' यसले तिनलाई आफ्नो उच्चभन्दा बाहिर हल्लायो "जॉनसनले भने।
उनले बच्चालाई ठुलो पानीको एक टबमा राखे भने, तर उनी वरपर आउन सकेनन्। त्यसपछि उनले उसलाई बेडरूम फ्लोरमा राखे, जहाँ उनको मृत्यु भएको दुई दिन बाँकी रह्यो। डरलाग्दो कि उनी बकाया वारंटमा गिरफ्तार हुन सक्थे, जॉनसनले निर्णय गरे कि मेडिकल मद्दतको लागि कल नगर्ने निर्णय।
एक क्यान्सस सिटी ज्यारुले एक अपराधी निर्णय फिर्ता गर्नु अघि लगभग तीन घण्टाको लागि जान्दथ्यो । हरिले जॉनसन,29 को मृत्यु र तीन वर्षीय एरिक ग्रीन, उनको त्यसकी प्रेमिकाको बेटीको सजावटको आरोप लगाएको थियो जसले एक बर्ष पछि विवाह गर्यो।
जॉनसन एक बच्चा र दुर्व्यवहार को कल्याण को खतरे को खतरे को दोषी ठहराया थियो।
समापन तर्कको समयमा, अभियुक्तहरूले ज्यारलाई भने कि एक दोषी निर्णयले अन्ततः एरिकका लागि न्याय ल्याउनेछ।
"यो स्वार्थी गायकले यस3वर्षीया बालिकाको जीवनलाई पहिले राख्ने निर्णय गरे" भनी अभियुक्तक जिम कान्टरराजले बताए।
21 नोभेम्बर, 2008 मा, हेररेल जॉनसन लाई पेरोल बिना जीवन को सजाय दिइएको थियो।
सबैभन्दा अधिक कुख्यात अपहरणकारी
'रोल थन्डर, सुन मेरो रो' उद्धरण
बैरी स्ट्रास को अध्याय को सारांश '' ट्रोजन वार: ए न्यू इतिहास '
मिल्की वेले आकाशगंगा
लेखनको लागि एक सानो स्टोरीको भाग
इथानोल सब्सिडी बुझ्ने
स्कूलदेखि जेल पाइपलाइन बुझ्ने
विश्वको शीर्ष 10 प्रतिस्पर्धी खानाहरू
नेपोलियन युद्ध: कोपेनहेगन युद्ध
एरिजोना राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश
साधारण पत्तिहरूसँग पेडहरू - चिसो र बेरोजगार पत्तिहरू
पहिलो वर्णमा के थियो?
फ्लफी डिस्कको इतिहास
क्यामिली Va Nager: सजिलो फ्रांसीसी - अंग्रेजी द्विभाषी कथा
1848: विवाहित महिलाहरूले सम्पत्ति अधिकारको अधिकार लिन्छन्
कसरी सुपर ग्लु हटाउने
लामास र अलापाका
बौद्ध देवी र दया को आशीर्वादप्रकार
बाल दुलही र बाल विवाह को बारे मा 10 तथ्य